किन भयो दशैमां शेयर बजार प्रभाव ? - Dainikee News::
किन भयो दशैमां शेयर बजार प्रभाव ?
सेयर बजारमा दसैंको प्रभाव देखिएका कारण बजार घट्नेक्रम सुरु भएको छ । घटस्थापनाको १५ दिन अघिबाट सेयर बजारमा दसैंको प्रभाव पर्ने गर्छ । यसपटकको सेयर बजारमा पनि यस्तै प्रकृति दोहोरिएको छ ।
सेयर बजार घट्न थालेको करिब दुई वर्ष नाघिसकेको छ । दुई वर्षदेखि निरन्तर घटिरहेको सेयर बजारमा दसैंको चहलपहल सुरु भएसँगै कारोबारमा सुस्तता आउन थालेको हो । आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनाको अवधिमा कम्पनीले बोनस, हकप्रदलगायतका स्किम सार्वजनिक गर्ने भएका हुँदा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण मान्ने गरिन्छ । यसले बजारमा केही चलायमान ल्याउने गरे पनि यसले निरन्तरता पाउन सकेको देखिँदैन । नागरिक लगानीकोषका सेयर शाखा प्रमुख रोशनजंग कार्की दसैंका लागि पैसा जोहो गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि लगानीमा सुस्तता आउनु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । दसैंमा घर खर्चका लागि समेत पैसा जोहो गर्ने प्रवृत्तिले सेयर बिक्री बढेको छ । यसले बजारलाई घटाउन सहयोग पु¥याएको एक स्टक ब्रोकरले बताए ।
१ हजार ५ सयदेखि १ हजार ८ सय अंकको बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्तासँग आफूले पाएको बोनस र हकप्रद सेयर जोड्दा पनि सावाँ प्राप्त गर्ने अवस्था छैन । सेयर बजारमा जहिले पनि ठूला लगानीकर्ताभन्दा साना लगानीकर्ता फस्ने गरेका छन् । अहिले पनि त्यस्तै भएको छ । ठूला लगानीकर्ताले नेप्से परिसूचक न्यून हुँदा नै सेयर खरिद गरेका कारण उनीहरूले घट्दो बजारमा पनि सेयर बिक्री गरेर नाफा आर्जन गर्न सक्छन् तर नयाँ लगानीकर्तामा भने यस्तो अवस्था देखिँदैन । सेयर विश्लेकहरूका अनुसार पछिल्लो समय अधिकांश लगानीकर्ता घाटामा रहेको र अहिलेको बजारमा पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेका कारण बजार घटेको हो ।
सेयर बजार घट्नुमा बैंकको उच्च ब्याजदर र सेयर आपूर्ति बढ्नु रहेको छ । सेयर मूल्य घटेका कारण हकप्रद र एफपीओ बिक्री हुन छाडिसकेका छन् भने पहिलेको बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले सावा“ प्राप्त गर्ने अवस्थासमेत गुमाइसकेका छन्
लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्याल आमलगानीकर्तामा आत्मविश्वास देखिन नसक्दा समस्या देखिएको बताउँछन् । लगनीकर्तामा आत्मविश्वास नबढेसम्म बजारमा सुधार आउन नसक्ने उनको जिकिर छ । लगानीकर्ताका समस्या अपेक्षाकृत रूपमा सम्बोधन नहुँदा पनि मनोवैज्ञानिक असर देखिएको उनको भनाइ छ ।
सेयर बजारमा सुधार आउन नसक्नुमा बढ्दो सेयर आपूर्ति पनि एउटा कारक तŒवका रूपमा रहेको छ । आईपीओ तथा एफपीओ स्वीकृत भएर बजारमा आएका कारण सेयर आपूर्ति बढेको छ । बैंक तथा बिमा कम्पनीलाई चुक्ता पुँजी पु¥याउन केन्द्रीय बैंकले दिएको निर्देशनका कारणले पनि असर मसान्तसम्ममा सूचीकृत कम्पनीले आफ्नो नाफाका आधारमा सेयरधनीलाई बोनस तथा हकप्रद सेयर दिएकाले सेयर आपूर्ति बढेको हो । सेयर बजार घट्नुमा बैंकको उच्च ब्याजदर र सेयर आपूर्ति बढ्नुलाई लिइएको छ । सेयर मूल्य घटेका कारण हकप्रद र एफपीओ बिक्री हुन छाडिसकेका छन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जले गत वर्षदेखि नै सञ्चालनमा ल्याउने भनेको अनलाइन कारोबार चालू आवको साउनदेखि सुरु भए पनि परीक्षणका रूपमा रहेको यो प्रणालीको वेबसाइट पूर्ण रूपमा स्थापित हुन नसक्नुले पनि सेयर कारोबारलाई घटाएको छ । मुलुकभरमा सेयर कारोबार गर्ने १५ लाख लगानीकर्ता रहेको आँकलन गरिए पनि पछिल्लो समय धितोपत्र कारोबारमा डिम्याट अनिवार्य गरेसँगै १३ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताले डिम्याट खाता खोलिसकेका छन् । त्यस्ता लगानीकर्तामध्ये करिब २ हजारजति लगानीकर्ताले मात्रै अनलाइन कारोबार प्रणालीमा प्रवेश गर्न ‘युजरनेम र पासवर्ड’ लिएका छन् । यसले पनि अनलाइन प्रणाली नाममा मात्रै सीमित रहेको देखाउँछ ।
अझै पनि बैंक कर्जाको ब्याजदर घट्न सकेको छैन । बैंकमा रहेको अस्थिर ब्याजदरका कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर सेयर बजारमा परिरहेको छ । सरकारले बजेटमा पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ दशमलव ५ प्रतिशत पु¥याएपछि त्यसले बजार घटाउन थप सहयोग गरेको पनि बजारले देखाएको छ । अहिलेको सेयरबजार भनेको १ हजार ८ सय अंकभन्दा माथि पुगेर पुनः घट्दै १ हजार २ सय अंकको हाराहारीमा आएको छ । बजार बढेको समयमा दैनिक २ अर्बसम्मको सेयर कारोबार भएको थियो । तर, लामो सयम २०÷३० करोड रुपैयाँको किनबेच भइरहेको पुँजी बजारमा अहिले भने ४०÷५० करोड रुपैयाँको कारोबार हुन थालेको छ ।
खस्कँदो सेयर बजारमा सुधार ल्याउन सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा खुला गर्नुपर्ने देखिन्छ । आपूर्तिअनुसार सेयर खपत बढाउने नीति कहिले आउला भन्ने पर्खाइमा आमलगानीकर्ता रहेका छन् । आपूर्तिसँगै बजारलाई चुस्त राख्न त्यसअनुरूपको माग सिर्जना गर्ने अवस्था ल्याउन सरकार र नियामक निकायले सोच्नुपर्ने देखिएको छ ।
जुनसुकै देशको अर्थतन्त्रको मापन पँुजी बजारले गर्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता र सिद्धान्त पनि हो । त्यसैले, हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो छ भनेर हेर्न सर्वप्रथम देशको पुँजी बजारलाई हेर्ने गरिन्छ । नेप्सेलाई अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर मान्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा सरकारले कम्तीमा पनि लगानीको वातावरणमा दुई तिहाइले सुधार ल्याउनुपर्छ । सरकारले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्दै १५ लाख लगानीकर्तालाई पँुजी बजारमा आउने वातावरण सिर्जना गरी अहिले देखिएको सेयर कारोबारको उत्साहलाई निरन्तरता दिनेतर्फ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले पनि लगानीयोग्य रकम ९तरलता० अभाव हटाई कर्जामा लिने ब्याजदर घटाउने वातावरण सिर्जना गरे मात्रै बजारमा गतिशीलता आउने आँकलन गरिएको छ । राजधानी दैनिकमा उद्वव सिलवालले लेखेका छन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, अशोज २७, २०७५ /Saturday, October 13th, 2018, 8:52 am